Knowledge – Page 18 – Muslim Book
နကေဗျ (မကျြနှာဖုံးအုပျခွငျး )
Mohamed Rahin | November 4, 2019
မကျြနှာဟာ အရှကျရဲ့ အစိတျအပိုငျးတှထေဲမှာမပါဝငျ ဘူးဆိုရငျ “မကျြနှာကို ဘာကွောငျ့ဖုံးအုပျရသလဲ” လို့ နှမငယျစိတျထဲမှာ တှေး ကောငျးတှေးနလေိမျ့မယျ။ သူစိမျးတဈရံဆံအမြိုးသားတှရှေမှေ့ာ မကျြနှာကို ဖုံးအုပျစရာမလို ဘူးဆိုတာ အမွဲတမျးဖျောထားရမယျလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ မိမိကို တှမွေ့ငျ တဲ့ သူစိမျးအမြိုးသားရဲ့ စိတျထဲမှာ ရာဂရမ်မကျ မဖွဈပျေါဘူးလို့ စိတျခြ ရ တဲ့အခွေ အနမှောပဲ မကျြနှာကို
အရှူံးမရှိသောမျှဝေမှု (ညတိုင်း နိယာသ်တစ်ခုပြုလုပ်ကြပါ)
Mohamed Rahin | November 3, 2019
နိယာသ္က — ယာ…အလ္လာဟ် ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ တနေ့တာ နဖိလ်အိဗာဒသ်တွေကို ကွယ်လွယ်သွားသောသူများအား ချီးမြှင့်ပေးတော်မူပါလို့ နိယာသ်ပြုလိုက်သည့်အပေါ် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က ကွယ်လွန်သွားသောသူများကို ချီးမြှင့်လိုက်တယ်.. အခုနိယာသ်လုပ်လိုက်လို့ ကိုယ့်ရဲ့ဆဝါးဗ်တွေလည်း မနည်းသွားပါဘူး။ ကွယ်လွန်သူများအားလုံးကိုလည်း အမျှချီးမြှင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဟဇရသ်ထာနဝီသခင်ကြီး ဥပမာလေး ဘယ်လိုပေးသလဲဆိုရင်.. ဖယောင်းတိုင်း တစ်တိုင်းမှ မီးကူးယူလိုက်တာ ထောင်သောင်းမက ကူးယူလိုက်ရင်ရော ပထမ
နမာဇ်​အချိန်​နှင့်​ပါတ်​သက်​၍ အ​ရေးကြိး​သော အချက်​များ (လူတိုင်းသိသင့်ပါတယ်)
မွတ်​စ်​လင်​မ်​တိုင်းအ​ပေါ် (နမာဇ်​)အချိန်​သိခြင်းသည်​ “ဖွရသ်​ “တာဝန်​ဖြစ်​သည်​ — သဟ်​ဂျွဇ်​ အချိန်​သည်​ ​အေရှာနမာဇ်​ ပြိးသည့်​ အချိန်​ မှ စ၍ နံနက်​”ဆွဗ်​​ဟေ ဆွာဒစ်​က်​” မတိုင်​မှိ အထိဖြစ်​​လေ သည်​။ သို့​သော်​ အမြတ်​ဆုးံ အချိန်​မှာ သန်း​ခေါ်င်​​ကျော်​ မှ ဖြစ်​​လေသည်​။ (သန်း​ကောင်​ယံ အချိန်​မှာ မွန်းတည့်​ ချိန်​အတိုင်းဖြစ်​၏) —
မိန်းမ / ဇနီး
Mohamed Rahin | November 2, 2019
လူတစ်ယောက်က သူတော်စင်တစ်ပါးကို မိမိ မိန်းမရဲ့ မကောင်းတဲ့အပြစ်တွေကို ပြောပြတယ် အဲ့တော့ သူတော်စင်က ထိုလူ့ကိုပြန်ပြောတယ် ခများအဝတ်တွေကို လျှော်ပေးတဲ့အဝတ်လျှော်သည်က ဘယ်သူလဲ? ထိုလူက ပြန်ဖြေတယ် မိန်းမ ခများရဲ့ ထမင်းချက်ဟင်းချက်က ဘယ်သူလဲ? ထိုလူက ပြန်ဖြေတယ် မိန်းမ ခများအိမ်ရဲ့ သန့်ရှင်းရေးသမားက ဘယ်သူလဲ? ထိုလူက ပြန်ဖြေတယ် မိန်းမ ခများအိမ်ရဲ့
ငယ်စဉ်တောင်ကျေး ကလေးဘဝက စွဲကပ်ခဲ့သော အကျင့်စရိုက်များသည် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သည်အထိ ပါသွားလေသည်။ ယင်းကိစ္စရပ်ဘက်သို့ မိဘများအနေဖြင့် အထူးသတိပြုအပ်ပေသည်။ သို့အတွက်ကြောင့် ကလေးဘဝမှပင်စတင်၍ အောက်ပါအတိုင်းပြုစု ပျိုးထောင်ရမည်။ ၁။အတတ်နိုင်ဆုံး မိခင်၏နို့ချိုအေးကို တိုက်ကျွေးပါ။ တိုက်ကျွေးသည့် နို့ကြောင့် ကလေးအပေါ်(အစရ်) သက်ရောက်မှု ရှိ၏။ ၂။အမျိုးသမီးများ၏ အကျင့်တရပ်မှာ ကလေးများအား ရဲဘော်၊စစ်သားဖြင့် လည်းကောင်း၊ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ အရာတစ်ခုဖြင်
ဒရူဒ်ရှရီးဖ် ဖတ်ရွတ်ခြင်းသည် မည်မျှ အကျိုးရှိသနည်း
တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ကိုကျေးဇူး ဆပ်တဲ့အနေနဲ့”ဒရူးရှရစ်” ကိုမိမိရဲ့ ဘဝဇင်ဒဂီသက်တမ်းမှာအမြဲတမ်းလို့ အမြောက်အများဖတ်တဲ့အလေ့အထကိုထားပါ။ “ဒရူးရှရစ်”(၁)ကြိမ်ဖတ်မယ်ဆိုယင် “အလ္လာဟ်”ရဲ့”ရဟ်မသ်”(၁၀)ကြိမ်ကျမယ်၊ ” ဖရစ်ရ်ှသာ”တွေက”မဂ်ဖွေရသ်”ဒိုအာေ တာင်းပေးမယ်။ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ရဲ့ကျေးဇူးတွေအွမ္မသ်ေ ပ်ါမှာအမြောက်အများရှိတယ်၊တမန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးကိုအွမ္မသ်ဟာဘယ်လို့မှပေးဆပ်လို့ကုန်မှာမဟုတ်ဘူး။ “ဒရူးဒ်”(၁)ကြိမ်ဖတ်မယ်”ဂျန္နသ်”မှာသူရဲ့အဆင့်အတန်း(၁၀)ဆင့်ကိုအလ္လာဟ်ကမြှင့် တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့”ရောင်သွာတော်”ရှေ့မှရပ်ပြီး”ဒရူးဒ်”ဖတ်မယ်ဆိုယင်အဲဒီအသံကို တမန်တော်မြတ်ကြီးကတိုက်ရိုက်ကြားတော်မူတယ်။အဝေးကနေ”ဒရူးဒ်”ပို့မယ်ဆိုယင်”ဖရစ်ရ်ှသာ”ဟာအဲ့”ဒရူးဒ်”ကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ “ရောင်သွာတော်”ပို့သတော်မူတယ်။ ပထမဦးဆုံး”ဂျန္နသ်”ကိုဝင်ရမည်”နဗီ”ဖြစ်တယ်။ တမန်တော်မြတ်ကြီးကိုမနက်ဖြန်ကေယာမသ်နေ့မှာ”အလ္လာဟ်”ဟာ”ကောင်ဆရ်”ရေကန်ကို ချီးမြှင့်တော်မူလိမ့်မည်။ “ဝစီလာ”ကိုချီးမြှင့်တော်မူလိမ့်မည်။ ( ဝစီလာ- ဆိုတာ”ရှဖွအသ်”အလ္လာဟ်ကတမန်တော်ကို”ရှဖွအသ်”အခွင့်ရေးချီးမြှင့်တော်မူလိမ့်မည်။ ဘယ်သူကတမန်တော်မြတ်ကြီးကို”ဒရူးဒ်” များများပို့ထားလဲအဲ့ဒီလူကိုတမန်တော်မြတ် ကြီးကမနက်ဖြန်ကေယာမသ်နေ့မှာ”ရှဖွအသ်” လုပ်မှာဖြစ်တယ်။ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ရဲ့”စွန္နသ်တော်”ပေါ်မှာဘယ်သူကအမလ်လုပ်ထားလဲ
၀ူဇူပြုခြင်းသည်အပြစ်ဂိုနာဟ် များမှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ရရန်
Mohamed Rahin | November 1, 2019
၀ူဇူပြုခြင်းသည်အပြစ်ဂိုနာဟ် များမှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ရရန် အကြောင်းခံဖြစ်ခြင်းဟဒီးစ်တော် တစ်ပုဒ်တွင် ဤသို့လာရှိ၏ အကြင်သူသည် ကောင်းမွန် ကျနသေသပ်စွာဝူဇူပြုလုပ်လျှင် ထိုသူ၏ ခန္ဓာကိုယ်မှ အပြစ်ဂိုနာဟ် ဟူသမျှတို့သည် လက်သည်းများအောက်ကပါ မကျန်ထွက်သွားသည်ဟု ကိုယ်တော် မြတ် ( ဆွ ) သခင်၏ သြ၀ါဒတော်ကို ဟဇ်ရသ် အွတ်စ်မာန် သခင် ကဆင့်ပြန်တော်မူခဲ့လေသည် ။
ဝုသူ ရေသန့်စင်ခြင်းဆိုင်ရာ စွန္နသ်တော်များ
(၁) မိမိအိမ်မှ ဝုသူရေသန့်စင်ကာ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်သို့သွားခြင်း (၂) ဝုသူရေသန့်စင်ရန် ရည်စူးချက်ဖြင့် ဝုသူပြု ခြင်း(ဥပမာ-“ကျွန်တောမျိုးသည် နမာဇ်ဝတ်ပြုရန်အတွက် ဝုသူပြု လုပ်ပါ၏”)ဟု ရည်စူးခြင်း (၃) “ဗစ္စမစ်လ္လာ ဟစ်ရ်ရဟ်မာ နစ်ရ်ရဟီမ်း” ဆိုလျက် ဝုသူရေသန့်စင်ခြင်း (၄) လက်နှစ်ဖက်လုံးကို လက်ကောက်ဝတ်ပါအောင် သုံးကြိမ်သုံးခါ ဆေးကြောခြင်း (၅) တံပူစားခြင်း(တံပူမရှိပါက လက်ချောင်းဖြင့်သွားတိုက်ခြင်း) (၆)
မွစ်လင်မ်တိုင်း ဒီသန့်ရှင်းမူ့ရယူပုံကို သိသင့်ပါ၏။ အမျိုးသမီးများသည် ဆံပင်ကိုစုပြီးခေါင်းပေါ်၌တင်၍ ထုံးထားခြင်း လုံးဝမပိုင်ပေ ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းအပေါ် ပြင်းထန်စွာ တားမြစ်ထားသည့်အပြင် ဂျန္နသ်အနံ့ပင်ရရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ဟု သတိပေးထားသည်။ ခေါင်းပေါ်တင်၍ထုံးထားခြင်း တခြားနည်းထုံးခြင်းပိုင်၏ ။ ဥပမာနောက်စေ့ပေါ်တွင်ထုံးခြင်းသည် ပိုင်ရုံမက နမာ့ဇ်ဖတ်ရာတွင်လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်၏ (အဟ်စနလ် ၇၄) ဆံပင်အတုသည်လူသား၏ ဆံပင်ဖြစ်ပါကမိမိဦးခေါင်း၌ တပ်ဆင်ခြင်းလုံးဝမပိုင်ပေ။ အလွန်ကြီးလေးသော အပြစ်ဖြစ်သည့်အပြင် ဟဒီးစ်၌ လအ်နသ်ကျမည်ဟု
တမန်တော်မြတ်ကြီ်းﷺ အပေါ်ချစ်ခင်မှု
ပြင်သစ်စာရေးဆရာ တစ်ဦးက အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ၏ အချစ်တော် ရစူလ်တမန်တော်ﷺ အား မတရား ချိုးနှိမ်စွပ်စွဲရေးသားသည့် ပြဇတ်ကိုရေးထားသည့် သတင်း စူလ်တန် အဗ္ဗဒူလ်ဟမီးဒ် ၂ ထံရောက်ရှိေ သာအခါ အလွန် စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ခဲ့သည်။ ငါတို့တမန်တော်ကို တိုက်ခိုက်တာထက် ငါအကြိမ် ၁၀၀၀ သေသွားတာပိုကြိုက်တယ် ကျနော်တို့ ရစူလ်ကိုယ်တော်အပေါ် အချစ်တွေဂုဏ်ပေးလေးစားမှုတွေ ဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုရင် အရာအားလုံး